Ukukhetha i-hairstyle: imithetho yokukhetha umfanekiso
Abathengi bakholelwa ukuba i-hairstyle kufuneka ikhethwe ngokulingana nokukhula. Into ephambili kukuvisisana, kwaye ukuba ufuna ukufezekisa, jonga kwisibuko umzimba wakho. "I-Business Style" ibhala malunga nemithetho elula yokukhetha i-hairstyle, ngoncedo apho unokuphucula kakhulu umfanekiso wakho.
Masiqale ngento yokuba, ngokudabukisayo, abathandi baqinisekileyo: ngoko i-fashionable short-short shortcut cut will not suit all girls, kodwa i-fragile, ubuhle kunye nomfanekiso omncinane njengoWinona Ryder, u-Audrey Tautou, uNatalie Portman. Kude amantombazana amancinci amancinci amancinci adala ingqiqo yokuphazamiseka - intloko ibonakala iyincinci.
Nangona kunjalo, kukho ukungafani kulo mgaqo: i-legislator yefashoni ye-"la men's" iinqwelo zokunyusa i-Audrey Hepburn kwaye yena, nangona ukukhula okuphakamileyo, behamba ngokungafani. Ukuba uyazi ukuba ubukeka buncinci, naphezu kokukhula okuphawulekayo, ukukhanda kwesikhumba esitsha "kwinkwenkwana" - kuwe.
Kubafazi, kungekhona nje ukuphakama, kodwa kakhulu, "ukukhula komzekelo" ukukhula, iinwele zokubamba iinwele njengoko nje i-chin okanye okanye ixesha elide lifanelekileyo. Indlela efanelekileyo ilungisa amagagasi ukuya kumahlombe.
Ukusuka ngasentla, kunokugqitywa ukuba iinwele ezinde ziza kufanana neentombazana ezincinci, nangona kunjalo, iingcali zithi, oku akunjalo. Ngokombono wabo, ngeenwele ezinde ezininzi ezinjenge "intshi" zibukeka ziyingane kwaye azithathwa ngokungathí sina. Oku akuyi kwenzeka xa wenza i-haircut-"ibhontshisi": intle, ihoxise kwaye imfutshane kakhulu ukuba ibonise intamo yakho, kwaye ngexesha elifanayo, ungakhangeli njengenkwenkwana.
Izinwele ezichanekileyo zigxininisa ukugoba komzimba kwaye, ukuba ucinga ukuba zihamba kakuhle, kungcono ukuba ungagqoki ngekhanda elinjalo. Kungcono kakhulu kumama "angumfuziselo" abakhangela ubude bendoda okanye iinwele ezibukhali ezilinganisela ubukhulu bomzimba ngendlela efanelekileyo. Ngendlela, oku kubonakala ngokucacileyo kumzekelo wobuhle obuhle beBeyonce: unwele lwezinwele ze-wavy luya kuye ngaphezu kwezinye zezinwele, kwaye uthanda ukumkhetha kuzo zonke iintlobo zeziganeko zemikhosi kunye nemidlalo.
Njengoko ucinga ukuba, amantombazana anomntu ongeyena wesifazane awukhuthazwa ukuba athathwe ngeenwele ezimfutshane kakhulu ezinokukwazi ukubonelela iimpawu zesintu. Bamenywa ukuba benze i-strick ephantsi kwe-chin, okanye bembethe iinqwelo ezide, ezide.
Ziqhayise ngebele kwaye ungacingi ukugxininisa ubuhle bayo? Kwale meko, akufanele ugqoke izinwele ezigqithiseleyo-"intonga" evula intamo kunye nentambo! Kule meko, amabele amaninzi ayabonakala engenakucatshulwa. Kutheni ukunyamezela into esele ibonakala kuwo wonke umntu? Umfanekiso wesondo obuninzi kakhulu kumnini womqulu osisigxina - ukukhululeka, iinwele ezincinci .
Ezi ngcebiso aziqedi indlela yendabuko yokukhetha i-hairstyle esekelwe kwisakhiwo seenwele kunye nohlobo lobuso. Musa ukulawula izinto ezinokuthi zixubushe kuphela kunye neengcali kwi-salon enobuhle: umzekelo, isixa semali nemali ozimisele ukuyichitha kwilondolozo lwemihla ngemihla yeenwele. Ngokubanzi, uvavanyo kufuneka lulandelwe ngokulungelelanisa!
I-ambulensi eyoyikisayo: uhlobo luni lobahlengikazi abagqoka i-Halloween
Yintoni engcono kwinwele intombazana eninzi okanye inwele emfutshane
Indlela yokukhetha isitya esifanelekileyo esinomxholo ngohlobo lomntu: Kufuneka ukuba ufunde!
Ukupheka kwenyama enonkcenkceshe yenyama yeenkomo neenkomo zengulube
IBhunga - indlela yokuziphatha kumsebenzi omtsha
Ngathini na nini ukuxelela umntwana ngesondo
Ukulungiselelwa kwamanzi asele
Kutheni abantu bezama ukusibonisa?
Susa amaqabunga ebisi, ushokoledi, ikhofi, njl.
Ukuzonwabisa kunye nenzuzo yokusikwa kweSpain